စိတ်ပညာ ပါမောက္ခဟောင်း၊ စာရေးဆရာကြီး ဒေါက်တာ ကျော်စိန် ကွယ်လွန် | ဧရာဝတီ
စိတ်ပညာ ပါမောက္ခဟောင်း၊ စာရေးဆရာကြီး ဒေါက်တာ ကျော်စိန် ကွယ်လွန်
ရန်ပိုင်| January 3, 2013 | Hits:2,928
4 | | မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီ အစိုးရ၏ နောက်ဆုံးပညာရေးဝန်ကြီး၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် စိတ်ပညာပါမောက္ခဟောင်း၊ စာရေးဆရာကြီး ဒေါက်တာကျော်စိန် (၈၁) နှစ်သည် ယမန်နေ့ နံနက် ၁၁ နာရီ ၂၂ မိနစ်၌ ရန်ကုန်မြို့တွင် လူကြီးရောဂါဖြင့် ကွယ်လွန်သွားသည်။
ဒေါက်တာ ကျော်စိန် ရေးသားခဲ့သည့် စာအုပ်တအုပ် (ဓာတ်ပုံ – myathayaphu.com)
“ရောဂါကတော့ ထွေထွေထူးထူးမရှိဘူး၊ လွန်ခဲ့တဲ့ ၄ လလောက် သွေးတိုးပြီး လှေကားပေါ်က ကျတယ်။ အဲဒီမှာ ဦနှောက်ကို နည်းနည်း ထိခိုက်သွားတော့ ဆေးပြနေရင်းကနေ ဆုံးတာပါ” ဟု သားဖြစ်သူ မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ် ဒု ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာ အောင်မြတ်ကျော်စိန်က ဆိုသည်။
ဆရာကြီး ဒေါက်တာ ကျော်စိန်၏ ကြွင်းကျန်သည့် ရုပ်ကလာပ်ကို လာမည့် သောကြာနေ့ မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင် ရေဝေးသုသာန်၌ သင်္ဂြိုဟ်မည်ဖြစ်သည်။
ပဲခူးဇာတိဖြစ်သော ဒေါက်တာ ကျော်စိန်သည် ၁၉၅၄ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၌ စိတ်ပညာဘာသာရပ်ကို စတင်လေ့လာဆည်းပူးခဲ့ပြီး ၁၉၆၆ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်နိုင်ငံ ကိုလံဘီယာ တက္ကသိုလ်မှ လူမှုစိတ်ပညာ ပါရဂူဘွဲ့ ရရှိခဲ့သည်။
စိတ်ပညာပါမောက္ခဖြစ်သူ စာရေးဆရာ တက္ကသိုလ် ဘုန်းနိုင်တို့နှင့် ခေတ်ပြိုင်ဟု ဆိုနိုင်ပြီး ဒေါက်တာ ကျော်စိန်သည် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၌ စိတ်ပညာဘာသာရပ်ကို သင်ကြားနေစဉ်ကတည်းကပင် ရှုမ၀၊ ငွေတာရီစသည့် မဂ္ဂဇင်းများတွင် စိတ်ပညာဆိုင်ရာ ဆောင်းပါးများ ရေးသားနေသူဖြစ်သည်။
ဆရာကြီး ဒေါက်တာ ကျော်စိန် ရေးသားခဲ့သည့် စာအုပ်များမှာ ဘာသာရပ်ပေါ်တွင် အခြေခံကာ အသိပညာပေး စိတ်ပညာဆိုင်ရာ စာအုပ်များဖြစ်ပြီး စာသင်သားများသာမက ပြင်ပစာဖတ်သူများကပါ ကြိုက်နှစ်သက် လက်စွဲထား လေ့လာရခဲ့ကြရသည်။
စစ်တွေတက္ကသိုလ် စိတ်ပညာဌာနမှုး ဒေါက်တာ သက်လွင်က “ကျနော် ဘာသာရပ်မှာ ဆရာကြီး ဒေါက်တာ ကျော်စိန်လို ရိုးရိုးစာပေမှာရော ပညာရပ်ပိုင်းမှာပါ နှစ်မျိုးစလုံး အားကောင်းတယ်သူ ရှားတယ်။ ဆရာကြီးတက္ကသိုလ် ဘုန်းနိုင်တို့ပဲ ရှိတယ်” ဟု ဆိုသည်။
၁၉၇၃ ခုနှစ် စာပေဗိမာန် စာပေဆုရ “သင့်ဘ၀အတွက် အသုံးချစိတ်ပညာ” သည် စာအုပ်ကောင်းတအုပ်ဖြစ်ပြီး စိတ်ပညာနှင့် အနုစာပေဆိုင်ရာ အပါအ၀င် ဆရာကြီး ဒေါက်တာ ကျော်စိန် သုတေသနပြု ရေးသားခဲ့သည့် ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး စစ်ဆေးလွှာများသည်လည်း စိတ်ပညာ ဘာသာရပ်တွင် အသုံးချတန်ဖိုးရှိကြောင်း ဒေါက်တာ သက်လွင်က ရှင်းပြသည်။
လက်ဝဲစာရေးဆရာ ဗန်းမော်တင်အောင်မှာ ဒေါက်တာ ကျော်စိန် အကြိုက်ဆုံး စာရေးဆရာဖြစ်ခဲ့ပြီး၊ ဗန်းမော်တင်အောင် ရေးသားခဲ့သည့် စာစုများကို နှုတ်တိုက်ကျက်မှတ် ရွတ်ဆိုသည့်အထိ သရုပ်မှန်စာပေကို နှစ်သက်သူဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ပါတီ (မဆလ) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးနေ၀င်း၏ ချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုကို ရယူနိုင်သူအဖြစ် ပညာရေးလောကတွင် လူသိများသော်လည်း ရိုးရှင်းစွာပင် နေထိုင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ မဆလအစိုးရ၏ နောက်ဆုံးအချိန်ဖြစ်သည့် ၁၉၈၈ ခုနှစ် နှစ်ဦးပိုင်းတွင် ပညာရေးဝန်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်းခံရသည်။
သို့သော် ၀န်ကြီးသက်တမ်းမှာ ၃ လခန့်သာ ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး မဆလ အစိုးရ ပြုတ်ကျခဲ့သည့်နောက်ပိုင်း ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် စိတ်ပညာဌာနတွင် ဂုဏ်ထူးဆောင် ပါမောက္ခအဖြစ် ဆက်လက်တာဝန်ယူခဲ့သည်။ သို့သော် ၁၉၉၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ (တစည) ကိုယ်စားပြု၍ ရန်ကုန်တိုင်း သင်္ကန်းကျွန်းမဲဆန္ဒနယ်မှ ၀င်ရောက်အရွေးခံခဲ့ရာ ရှုံးနိမ့်ခဲ့သည်။
စိတ်ပညာဆိုင်ရာ စာအုပ် ၃၀ ခန့်ရေးသားခဲ့ရာ ခေတ်သစ်စိတ်ပညာ၊ စိတ်ပညာ ရှုဒေါင့်အထွေထွေ၊ သင့်ဘ၀အတွက် အသုံးချစိတ်ပညာ၊ စိတ်ပညာဆောင်းပါး ပေါင်းချုပ်၊ စိတ်ပညာသမိုင်းကျမ်း၊ ဆရာဇော်ဂျီ စာပေ အထုပ္ပတ္တိ (ဇော်ဋီကာ)၊ လူငယ်လမ်းညွန်၊ ဖခင်ဘ၀ ဇတ်လမ်းစုံ စသည့် စာအုပ်များမှာ ထင်ရှားသည်။
ဆရာကြီး ဒေါက်တာ ကျော်စိန်သည် အမျိုးသားစာပေ တသက်တာဆုနှင့် ပခုက္ကူ ဦးအုံးဖေ တသက်တာစာပေဆုရှင်အဖြစ် ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပြီး ကွယ်လွန်ချိန်တွင် ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်တင်တင်အေးနှင့် သားသမီး ၃ ဦး၊ မြေး ၇ ဦးကျန်ရစ်သည်။
ပညာရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန် အမြန်လိုအပ်နေ
X2O သင်္ကြန်မဏ္ဍပ် ဗုံးကွဲမှု စွပ်စွဲခံရသူ ကိုဖြိုးဝေအောင် ကွယ်လွန်
ရော့ခ်တေးသံရှင် ဟယ်ရီလင်း ကွယ်လွန်
ဗကပ အတွင်းရေးမှူး ဗိုလ်ကြင်မောင် ကွယ်လွန်
2 Responses	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website minn thant January 3, 2013 - 6:56 pm	Despite he served asaeducation minister in last BSPP era, I respect him because of one major historical thing in RASU,’s 10th yr anniversary magazine of U Thant in 1984,which he signed then he was transffered to Myintgyina.
Sayagyi kaung yar su ga ti larr par zay.I trust him.
Reply	U Thi Ha Tint Swe January 4, 2013 - 11:26 am	we’re very sad on Dr.Kyaw Sein’s death on Jan,3rd,2013 because he was our professor for Psy-dept of RASU & Workers’ College,Botataung,Rgn,Burma since 1972 to 1977 and he is Psychological talent on Psycho-analysis but Dr.Nyi Win Mhan is Psychological talent on Psycho-behaviourism once uponatime! he said that he liked more Psychologist than Minister and then,Dr.Kyaw Sein accepted the position of Educational minister of Ma-Sa-La and since that moment,his portrait slowly disappeared among Psychologists!
လိင်ကိစ္စ အပေါ် အမျိုးသမီးတုို့၏ မှားယွင်းသော ယူဆချက်များ
အင်းစိန် GTI ကျောင်းကို ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာနသို့ ပြန်လည်လွှဲပြောင်း
အယူအဆလွဲသော လိင်ဆက်ဆံရေး အမှားများ
စစ်တမ်းများက ပြောသော လိင်ပုိုင်းဆုိုင်ရာ တကုိုယ်ရေ အာသာဖြေခြင်း
အခြေခံ ပညာရေးဝန်ထမ်းများ လစာတိုးမည်
ရေပြန်ကျသည့် အတွက် ဧရာဝတီတိုင်းရှိ ကျောင်းပေါင်း ၁၂၀၀ ကျော် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်